Exit (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ယောငျနမျ ဆိုတဲ့ အသကျလတျပိုငျး အရှယျ လူပြိုကွီးဖွဈခါစ
တောငျတကျသမားဟောငျး ကနေ ဇတျလမျးစရမှာပဲ..
အားကစားအလုပျကိုသာ စှဲမွဲ လုပျပွီး
အလုပျလဲ မယျမယျရရ မရှိ အငျတာဗြူးတိုငျး မအောငျ
အိမျက အဖေ နဲ့ အမေ ဆီ ကပျစားနတေဲ့ သူ တဈယောကျပေါ့ 😀
ယောငျနမျ မှာ အဈမ တှေ ရှိပွီး အကုနျအိမျထောငျကကြုနျပမေဲ့
ယောငျနမျ တဈယောကျသာ ဂျေါမစှံ လူပြိုကွီး လုပျနပွေီး
အိမျကနေ မခှာနိုငျ ဖွဈနခေဲ့တာပါ….
တဈရကျမှာတော့ ယောငျနမျတို့ အမေ ရဲ့ မှေးနေ့ အဖွဈ
ဟိုတယျ တဈခုမှာ အခနျးငှားပွီး မှေးနေ့ ပါတီ ကငျြးပကွပါတယျ
အဲ့ဒီမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ အူဂြူ ဆိုတဲ့ ယောငျနမျ နဲ့ အရငျက
ကောငျမလေး နဲ့ ပွနျဆုံပါလရေော..
ယောငျနမျတို့ ပါတီလုပျနတေဲ့ နရောနားမှာပဲ လူလုပျတဲ့
သဘာဝ ဘေး တဈခု ကရြောကျလာပါတော့တယျ…
ယောငျနမျ နှငျ့ မိသားစု အားလုံး အထဲမှာ ပိတျမိနပွေီး
မိသားစု တှကေို ဘေးကငျးရာ ပို့ဖို့ နဲ့ အသကျဆကျရှငျဖို့
ဒီရုပျရှငျကားဟာ စ လယျ ဆုံး အသကျရှုဖို့ မရေ့လောကျတဲ့အထိ
အခနျးတှေ ပါဝငျပွီး ကွညျ့ရှုသူကို စိတျအကနြေပျဆုံး ပေးစှမျးနိုငျမှာပါ
ယောင်နမ် ဆိုတဲ့ အသက်လတ်ပိုင်း အရွယ် လူပျိုကြီးဖြစ်ခါစ
တောင်တက်သမားဟောင်း ကနေ ဇတ်လမ်းစရမှာပဲ..
အားကစားအလုပ်ကိုသာ စွဲမြဲ လုပ်ပြီး
အလုပ်လဲ မယ်မယ်ရရ မရှိ အင်တာဗျူးတိုင်း မအောင်
အိမ်က အဖေ နဲ့ အမေ ဆီ ကပ်စားနေတဲ့ သူ တစ်ယောက်ပေါ့ 😀
ယောင်နမ် မှာ အစ်မ တွေ ရှိပြီး အကုန်အိမ်ထောင်ကျကုန်ပေမဲ့
ယောင်နမ် တစ်ယောက်သာ ဂေါ်မစွံ လူပျိုကြီး လုပ်နေပြီး
အိမ်ကနေ မခွာနိုင် ဖြစ်နေခဲ့တာပါ….
တစ်ရက်မှာတော့ ယောင်နမ်တို့ အမေ ရဲ့ မွေးနေ့ အဖြစ်
ဟိုတယ် တစ်ခုမှာ အခန်းငှားပြီး မွေးနေ့ ပါတီ ကျင်းပကြပါတယ်
အဲ့ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အူဂျူ ဆိုတဲ့ ယောင်နမ် နဲ့ အရင်က
ကောင်မလေး နဲ့ ပြန်ဆုံပါလေရော..
ယောင်နမ်တို့ ပါတီလုပ်နေတဲ့ နေရာနားမှာပဲ လူလုပ်တဲ့
သဘာဝ ဘေး တစ်ခု ကျရောက်လာပါတော့တယ်…
ယောင်နမ် နှင့် မိသားစု အားလုံး အထဲမှာ ပိတ်မိနေပြီး
မိသားစု တွေကို ဘေးကင်းရာ ပို့ဖို့ နဲ့ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ စ လယ် ဆုံး အသက်ရှုဖို့ မေ့ရလောက်တဲ့အထိ
အခန်းတွေ ပါဝင်ပြီး ကြည့်ရှုသူကို စိတ်အကျေနပ်ဆုံး ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ
Option 1 storage.msubmovie.com 490 MB SD (480p)
Option2megaup.net 490 MB SD (480p)
Option5uptomega.com 490 MB SD (480p)
Option 11 storage.msubmovie.com 2.9 GB FHD DTS 5.1
Option 12 megaup.net 2.9 GB FHD DTS 5.1
Option 13 yuudrive.me 2.9 GB FHD DTS 5.1
Option 14 sharer.pw 2.9 GB FHD DTS 5.1